China Flat umfutholuketshezi ahlabayo umshini Ukwakha futhi Factory | I-Kangpa
Umshini wokusika we-hydraulic flat ulula futhi uyasebenza ngokushesha, okuwukuguqula ukushiyeka komshini wokusika wendabuko.
Ukwakhiwa kwangaphambili kokuthuthukisa ukusebenza kahle komkhiqizo embonini. Lo mshini ulungele ipulasitiki, isikhumba, igwebu, inayiloni, indwangu, iphepha.
Ukubumba nokusika ungqimba olulodwa noma ngaphezulu lwamabhodi nezinto zokwenziwa ezahlukahlukene zisetshenziswa kakhulu ekusetshenzisweni kwesikhumba, ukwenza izicathulo, izingubo, izikhwama zesikhumba, amathoyizi, amaplastiki, ukupakisha nemboni yezimoto, njll.
Isilinda kawoyela ophindwe kabili, ukucacisa induku yokuxhuma kabili ikholomu yokulinganisa okuzenzakalelayo kwamakholomu amane, ukusika ukujula + -0.1mm endaweni ngayinye yokusika.
Zonke izingxenye zokuxhuma ezishelelayo zalo mshini zinedivayisi yokuthambisa ye-othomathikhi yokuhambisa uwoyela. Akukho ukukhathazeka ngomonakalo ezingxenyeni zemishini ezidalwa ukufakwa uwoyela ngesandla, ukuze ukugqoka kwehliswe kube sezingeni eliphansi, futhi isivinini sokusika nokufa komshini sithuthukiswe.
Lapho ikhanda lokusika licindezelwe phansi, lizokwehlisa ijubane ngaphambi kokuthi lithinte umsiki ongu-10mm, bese kufakwa ingcindezi enezigaba ezimbili. Lapho ipuleti yokusebenza ephezulu icindezelwe phansi kusika, izoguquguquka futhi isikwe ukuze kungabikho phutha lobukhulu phakathi kwezendlalelo ezingaphezulu nezingezansi lapho kusikwa izinto ezi-multilayer.
Isakhiwo sokusetha esihlukile, esinedivayisi yokuvikela ukuhleleka okuhle, ukulungiswa okuguqukayo kokuphakama kokusika namandla okusika, kungandisa impilo yensizakalo yomsiki wokufa nokusika i-offset. Isakhiwo sokubeka isikhunta esihlukile ukufanisa ummese wokusika nobude bokusika. Yenza ukulungiswa kwesifo sohlangothi kube lula futhi kunembile.
Uhlelo lwe-hydraulic olungenisiwe luhambisana nezinto zikagesi zaseTaiwan nezaseJapan, ezonga ugesi, zinomsindo ophansi, ukusebenza okulula, futhi zandisa ukusebenza kahle komsebenzi.
Ukushisa okuphezulu kwe-electrostatic ebusweni bomshini akusebenzisi ukufafaza kwendabuko okwenziwa ngesandla.
Olandelayo: Shaft yokwandiswa komoya
Umshini Wokunamathisela we-Pur Hot Melt Glue Nonwoven, Umshini Oshisayo Wokunamathisela Okushisayo Wengubo Yengubo, Umshini Wokushisa we-Pur Hot Melt Adhesive Laminating, Umshini Wokunamathisela Okushisayo Wokuncibilika Okushisayo NgeSitifiketi seCe, I-Hot Melt Glue Isicelo, Okuzenzakalelayo Hot Melt Glue wokulaminetha Machine,